Uhlu Lwama-Onjiniyela | Uhlu Lonjiniyela | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Uhlu Lwezingcwethi Zonjiniyela
Uhlu lwe-imeyili lwonjiniyela lokwakha imikhankaso yokuthengisa ye-imeyili yenkampani yakho. Ungafinyelela abaphathi bezinjiniyela abaphezulu namuhla ngobuchwepheshe bezindawo ezahlukahlukene. Futhi bayaphendula ekunikezelweni okujwayelekile okubandakanya ukubhaliswa, ama-webinars, amasemina nokuningi. Cishe, iDatabase Lokungena Kokugcina Lokunikeza likunikeza lonke uhlu lwamakheli olwaziwe kabusha lwe-imeyili. Ngoba, lolu hlu lwamakheli luvuselelwa nge-2018 futhi uzothola i-95% idatha eqondile lapha. Ngakho-ke, i-Database Yokuthumela Kamuva Yamahhala inolwazi lwethimba labakhi bemininingwane. Njengomphumela, Sinikeza kuphela ngaphezu kwakho konke uhlu lwe-imeyili olusebenzayo nolusebenzayo kuwe.
Ngakho-ke, Okwethu kukhona noma yikuphi ukumaketha kwe-imeyili okuhlosiwe ukuthi iziphi izigaba zakho ezihlosiwe noma isihloko somsebenzi Umcimbi ngaphezulu. Futhi, yakha uhlu lwamaposi oluqondisiwe lwezihloko ezitholakalayo ze-CEO, i-CFO, i-CMO, i-COO, i-CTO, i-CIO, oMongameli, uSihlalo, i-GM, i-MD, iMenenja nezinye eziningi.
Thenga Izinhlu Zokuthumela Zamanje Zonjiniyela Zamuva
Inani lamarekhodi: 30,000
* Igama Lokuqala * Igama lebhizinisi * Ikheli * Idolobha * Ikhodi ye-Zip
Onjiniyela Babhalisa Uhlu lwemibuzo Nempendulo
Ikheli le-imeyili laseBrazil
Ikheli le-imeyili laseMexico
Uhlu lwe-imeyili lwaseColombia
Uhlu lwe-imeyili lwasePeru
Uhlu lwe-imeyili lwaseVenezuela
Uhlu lwezinombolo zocingo lwase-UK
Uhlu lwezinombolo zeselula lwaseJalimane
Uhlu lwezinombolo zeselula ePhilippines
Idatha ye-imeyili ye-B2B